နိုဝင်ဘာ 2021 – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Monthly Archives: နိုဝင်ဘာ 2021
ဟိ 2021 ဟောင်ကောင်ရှိ Google Play ၏ အကောင်းဆုံး Game Changer, မကာအိုနှင့် ထိုင်ဝမ်, ပထမဆုံးသော 3D ရုပ်ပုံဆောင်ထားသော idle မိုဘိုင်းဂိမ်း, Figure Fantasy စတိုင်လ် ရောက်ရှိလာပါပြီ။! ဒီမှာ, မင်းရုပ်တုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။’ သခင်, သူတို့ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ စွန့်စားခန်းကို ခံစားလိုက်ပါ။. ဂိမ်းတွင် အင်္ဂါရပ်များ 3D အသေးစား ဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေပြု ပုံဖေါ်ခြင်း (PBR) နည်းပညာသည် လက်မတိုင်းကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, စိတ်ကူးယဉ်, Figure
Rocket League ၏ထုတ်လုပ်သူများထံမှ, ကားဘောလုံးကို မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် ပြန်လည်ပုံဖော်ထားသည်။! အလိုလိုသိနိုင်သော ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ဂိမ်းတွင်ဝင်ရောက်ပါ။. မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ပိုက်ထဲကို ဘောလုံးထည့်ရတာ ရိုးရှင်းပါတယ်။, ဒါပေမယ့် သတိထားပါ။! မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်က ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။. ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် သင်၏မြှင့်တင်မှုကို နှိပ်ပါ။, သို့မဟုတ် ရယူရန် အသုံးပြုပါ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, League, ဒုံးပျံ, Sideswipe
Wildshade မြင်းများအကြောင်း သင်ကြားဖူးပါသလား။? မင်းရဲ့အိပ်မက်မြင်းကို မွေးမြူလိုက်ပါ။ 40 ရွေးချယ်စရာ သန်း, မြင်းတစ်ကောင်ချင်းစီကို လိုက်ဖက်တဲ့ tack နဲ့ တပ်ဆင်ပါ။, သင်သည် ဒဏ္ဍာရီလာ Wildshade နွားအုပ်နှင့် ထိုက်တန်ကြောင်း သက်သေပြပါ။. စိတ်ကူးယဉ် မှော်မြင်းပြိုင်ပွဲများကို အနိုင်ယူပါ။, စွန့်စားမှုအပြည့်ရှိသောကမ္ဘာ! ဟိုအရင်တုန်းက, Wildshade ရွာအနီးတွင် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်, မှော်ဆန်တဲ့ အရာတစ်ခု ယူသွားတယ်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
တော်တယ်။! You’ve found an addictive classic bubble သေနတ်ပစ်ဂိမ်း.《Bubble Breaker-Aim To Win》 သည် သင့်စိုးရိမ်မှုများကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ရောင်စုံဘောလုံးများအားလုံးကိုဖွင့်ပြီးအဆင့်ကိုပြီးမြောက်ရန်ပစ်မှတ်ကိုထိပါ။! ကစားရန်လွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။. မင်းရဲ့အရည်အချင်းတွေအတွက် လက်စားချေဖို့ ရာနဲ့ချီတဲ့အဆင့်တွေကို အနိုင်ယူလိုက်ပါ။. ဆန်းသစ်သောစတိုင်နှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): BreakerAim, ပူဖောင်း, မင်္ဂလာပါ, WIN
Huggy wuggy poppy playtime သည် ဤထိတ်လန့်စရာ ပဟေဋ္ဌိစွန့်စားမှုတွင် ဒေါသဖြစ်စေသော animatronics များကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်သည့် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ စွန့်စားခန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. အင်္ဂါရပ်များ:– အံ့သြဖွယ် 3D ဂရပ်ဖစ်– အရည်အသွေးမီမိုဘိုင်းထိန်းချုပ်မှု– Survival ထိတ်လန့်စရာ နေရာတိုင်းတွင် ရှိနေသည်။– သင်၏နောက်ထပ်ရွှေ့ရန်စီစဉ်ရန်မြေပုံ– အခန်းများစွာနှင့် မွမ်းမံမှုများ– ဘိန်းကစားချိန် လွယ်ကူစွာ ကစားရန်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, Huggy, ကစားသည်, ကစားချိန်, Poppy, Wuggy
ဇာတ်လမ်းသည် ဤခရီးတွင် ကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အရာများစွာဖြင့် သူ့မိသားစုကို ရှာဖွေရန် ခရီးစတင်ခဲ့သော ပျောက်ဆုံးသွားသော မြွေတစ်ကောင်အကြောင်းဖြစ်သည်။. ခရီး၌, ဘယ်အရာကိုမဆို ခိုးယူလိမ်လည်လှည့်စားနိုင်တဲ့ မြွေတစ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာတွေကို မထိမိအောင် သတိထားပါ… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Poor, Snake
Circle Relax block puzzle သည် ရိုးရှင်းပြီး စွဲလမ်းစေသော ဂန္တဝင် slider ပဟေဋ္ဌိကို ပေးဆောင်သည်။. ပဟေဋ္ဌိကိုဖြေရှင်းရန် အကွက်များကို တို့ပါ သို့မဟုတ် ပွတ်ဆွဲပါ။. တည်ဆောက်ထားသော လှပသော အပူပိုင်းဒေသရှိ ကျွန်းရုပ်ပုံကို အသုံးပြု၍ ကစားပါ။, သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိ ပဟေဠိများကို ဖန်တီးပါ။. ဂိမ်းကို ဘယ်လောက်မြန်မြန် ပြီးနိုင်မလဲ။? Circle Relax ပါရှိပါတယ်။:• စွမ်းရည်တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာရန် ဂိမ်းအချိန်တိုင်းကိရိယာနှင့် တန်ပြန်ကိန်းဂဏန်းများကို ရွှေ့ပါ။• အခမဲ့ပဟေဋ္ဌိ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Art, မင်္ဂလာပါ, Circle, Daily, ပဟေ.ိ, သက်တောင့်သက်သာနေပါ
ဘိန်းကစားချိန်ထိတ်လန့်မှု/ပဟေဋ္ဌိဂိမ်းဗားရှင်းကို ကစားပါ။ 2, စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ စွန့်စားခန်းတစ်ခုပါ။, ပျော်စရာအပြည့်. နာမည်ကြီး Poppy Playtime ၏ နိယာမအပိုင်း. အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဘိန်းကစားချိန်ဂိမ်းတွင် သင်သည် အသက်ရှင်လျက် ပွေ့ဖက်သော ဝူဂီကို အနိုင်ယူရပါမည်။. ဘိန်းကစားချိန်အတွင်း ရှာဖွေရန် ဧရိယာများစွာဖြင့်, ဖြစ်နိုင်ခြေများသည် လုံးဝ အဆုံးမရှိပေ။play ပြီးပြည့်စုံသော ဘိန်းကစားချိန်!အံ့သြဖွယ်အင်္ဂါရပ်များ!1- ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Huggy, ကစားချိန်, Poppy, Wuggy
“ကျွန်တော်တို့က Handelabra ဆီက မျှော်လင့်လာတာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းသည် အပြစ်ကင်းစင်သည်။" – David Neumann, StatelyPlay.com “One Deck Dungeon သည် ဗျူဟာမြောက်ဂိမ်းကစားခြင်းများစွာကို ပေးစွမ်းသည်။ – Christian Valentin, AppSpy.com "အလှည့်တိုင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များပါရှိသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနက်နဲသောထောင်ချောက်အတွင်းရေးကိရိယာတစ်ခု" – PixelatedCardboard.com =============================== စွန့်စားခန်းခေါ်ဆိုမှုများ… ဒါပေမယ့် မင်းမှာ အမြဲတမ်း အချိန်မရှိဘူး... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Deck, Dungeon
အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်:ဒါက ချန်ပီယံနဲ့ ချန်ပီယံကြား ပြိုင်ဆိုင်မှုပါ။, ပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့ စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲက စတော့မယ်။ မင်းဟာ ထူးချွန်တဲ့ ပင်ပေါင်ကစားသမားဖြစ်ပြီး ပင်ပေါင်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်နေပြီ။,ဤနေရာ၌,သင်သည် အခြားထူးချွန်သော စားပွဲတင်တင်းနစ်ကစားသမားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲသည် နောက်ကောက်ကျသည့်စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။, တွဲလျက်ပါရှိ၏... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): တိုက်ပွဲ, မင်္ဂလာပါ, Table, Tennis